अत्यधिक तनावले यौन स्वास्थ्यमा समस्या, कसरी गर्ने व्यवस्थापन? – Health Post Nepal
अत्यधिक तनावले यौन स्वास्थ्यमा समस्या, कसरी गर्ने व्यवस्थापन?
२०७८ माघ २९ गते १७:४२
काठमाडौं – आज पनि धेरैजसो मानिसहरु सेक्ससम्बन्धी समस्याको बारेमा कुरा गर्न हिचकिचाउँछन्। आजभोलि मानिसमा तनाव, चिन्ताको स्तर यति बढेको छ कि यसको कारणले पनि यौन स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको छ। तनाव वा अन्य मानसिक समस्याले मानिसमा यौन दुर्बलता (सेक्सुअल डिस्फङ्सन) निम्त्याउँछ। यौन दुर्बलता के हो र तनावले यौन स्वास्थ्यलाई कसरी असर गर्छ त?
यौन दुर्बलता र यसका कारणहरू
यौन दुर्बलता भनेको एक प्रकारको यौन रोग नै हो। यस्तो अवस्थामा सेक्सको इच्छा कम हुन थाल्छ। यौन दुर्बलता जुनसुकै उमेरका मानिसहरूमा हुन सक्छ। तर, उमेरसँगै यसको सम्भावना पनि बढ्दै जान्छ। तनाव यौन दुर्बलताको ठूलो कारण हो। यसबाहेक यौन आघात, मधुमेह, मदिरा, निश्चित औषधिको सेवन, मुटु वा अन्य शारीरिक रोगका कारण पनि यौन दुर्बलता हुन सक्छ। यौन दुर्बलतामा कम यौन इच्छा, यौन उत्तेजनामा कमी वा समस्या, स्खलनमा समस्या, योनीमा दुखाइ जस्ता समस्याहरू समावेश छन्।
तनावले यौन स्वास्थ्यलाई कसरी असर गर्छ?
सेक्स तनाव कम गर्ने उत्तम उपाय हो। यसले एन्डोर्फिनलगायत अन्य हर्मोनहरू निकाल्छ, जसले मुड सुधार गर्छ। तर, अर्कोतर्फ तनाव र चिन्तामा हुनुले तपाईंको यौन स्वास्थ्यलाई पनि नराम्ररी असर गर्न सक्छ। तनावका कारण पुरुषलाई इरेक्टाइल डिसफङ्शन हुने सम्भावना हुन्छ। तनावले पुरुष र महिलाको यौन स्वास्थ्यलाई असर गर्छ।
तनाव के हो र यसको लक्षण के हुन्?
आजभोलिको व्यस्त जीवनमा मानिसहरु अव्यवस्थित जीवनशैली अपनाउँदा तनाव बढ्न थालेको छ। तनाव एक प्रकारको शारीरिक प्रतिक्रिया हो। जुन भावनात्मक, शारीरिक, रासायनिक कारणले हुन्छ। तनाव हुँदा मानिसमा क्रोध वा रिस उठ्ने, बेचैनी, चिडचिडापन, एक्लोपन जस्ता भावनात्मक लक्षणहरू देखिन सक्छन्। यो समस्यालाई समयमै समाधान गर्न सकिएन भने व्यक्ति डिप्रेसन, अस्वस्थ यौन जीवनलगायत अन्य स्वास्थ्य समस्याको सिकार हुन सक्छ।
-तपाईंलाई तनाव दिने कारणहरूबाट टाढा रहने प्रयास गर्नुहोस्।
-मद्यपान, धुम्रपानको अत्याधिक उपभोगबाट बच्नुहोस्।
-कुनै पनि कुरामा धेरै चिन्तित नहुनुहोस्, यसले तनाव पनि बढाउँछ।
-तनावका कारण कुनै शारीरिक वा यौन समस्या छ भने अवश्य चिकित्सकसँग कुरा गर्नुहोस्।
-मुड बढाउने खानेकुरा खानुहोस्। तरकारी, फलफूल प्रशस्त खाने। आहारमा ट्रान्स फ्याट, चिनीयुक्त खानेकुरा समावेश नगर्नुहोस्।
-आफ्नो मनपर्ने काम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। गीतहरू सुन्नुहोस्, किताबहरू पढ्नुहोस्, साथीहरूसँग घुम्न जानुहोस्।
-‘फिल‍ गुड’ हर्मोन सेरोटोनिन रिलिज हुने गतिविधिहरू गर्नुहोस्। पर्याप्त सुत्नुहोस्, पानी पिउनुहोस् तथा स्वस्थ खाना खानुहोस्।